Kodi 18 "Leia" သည် DRM, emulators နှင့်အခြားအရာများအတွက်အထောက်အပံ့ဖြင့်ရောက်ရှိသည် Linux မှ
Kodi ဖောင်ဒေးရှင်းမှယနေ့ကြေငြာခဲ့သည် အလွန်အမင်းမျှော်လင့် Kodi 18 Leia ၏ရရှိနိုင်၎င်း၏အသုံးပြုသူများကို multimedia content အားလုံးကိုတစ်နေရာတည်းတွင်ပျော်မွေ့ရန်ခွင့်ပြုထားသော open source multimedia စင်တာ။
Star Wars မင်းသမီး Leia ကိုအသက်ပြန်ရှင်စေခဲ့သောမင်းသမီး Carrie Fisher ကိုဂုဏ်ပြုသောအနေဖြင့် Leia အမည်ပေးခဲ့သည်, Kodi 18 သည်ပိုမိုကြီးမားသောဖြန့်ချိခြင်းထက် Kodi2Krypton ပြီးနောက် 17 နှစ်လာသည် ၎င်းတွင်အင်္ဂါရပ်များနှင့်အဆင့်မြှင့်မှုများအပြင်အခြားအဓိကပြောင်းလဲမှုများလည်းပါ ၀ င်သည်။
Kodi 18 နှင့်အတူအကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုမှာ video game emulators, ROMs နှင့် control များအတွက် support ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြစ်ပြီး system ကို retro console ဖြစ်လာစေသည်။ ဤအကောင်အထည်ဖော်မှုသည်ဂိမ်းကစားခြင်း၊ ဂျော့ပ်စတိတ်နှင့်ဗွီဒီယိုဂိမ်းများအတွက်အခြားတိကျသောထိန်းချုပ်မှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
"၎င်းသည်အလွန်အရေးကြီးသောအကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ ယခုအသုံးပြုသူများသည်ရုပ်ရှင်၊ တေးဂီတနှင့်တီဗီရှိုးများနှင့်အတူတူပင်မျက်နှာပြင်မှလက်ချောင်းထိပ်ရှိ retro ဂိမ်းများကိုကမ္ဘာကြီးနှင့်ပြီးသားဖြစ်သည်။"ဒါဟာအတွက်ဖတ်တယ် ကြော်ငြာ.
Kodi 18 Leia မှာဘာအသစ်တွေလဲ?
Kodi 18 Leia သည်သတင်းများစွာနှင့်တိုးတက်မှုများစွာကိုယူဆောင်လာခဲ့ပြီး၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြနိုင်သည် DRM အထောက်အပံ့ ထို့ကြောင့်သုံးစွဲသူများသည် multimedia ပါဝင်မှုများ၊ စာကြည့်တိုက်ကိုလေ့လာရန်နှင့်ပျော်မွေ့ရန်နည်းလမ်းသစ်များဖြင့်တိုးချဲ့ထားသောဂီတစာကြည့်တိုက်အပြင်တီဗွီတွင်တိုက်ရိုက် RDS အထောက်အပံ့နှင့်တိုးမြှင့်မှုများကိုရယူနိုင်သည်။
Blu-Ray အထောက်အပံ့အပြင်ဗွီဒီယိုနှင့်အသံဖွင့်ခြင်းအထောက်အပံ့ကို Kodi 18 တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးသင့်အားခွင့်ပြုသည် 4K, 8K နှင့် HDR အကြောင်းအရာများကိုချောချောမွေ့မွေ့ကစားပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, Kodi 18 သည် Bluetooth အတွက်အထောက်အပံ့၊ သင်၏စာကြည့်တိုက်တွင်အကြောင်းအရာပြရန် Android TV interface နှင့်လိုက်ဖက်မှု၊ Android, MacOS နှင့် Windows ရှိ binary repositories အတွက်အထောက်အပံ့ကိုထည့်သွင်းထားသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီအရေးကြီးဗားရှင်းအသစ်မှာ Kodi ရဲ့ဗားရှင်းအသစ်မှာပါ ၀ င်ပြီးသင်ကနေကူးယူနိုင်ပါတယ် ဒီ link ကို Android, MacOS, Windows နှင့်အခြားပလက်ဖောင်းများစွာအတွက်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » Kodi 18 « Leia »သည် DRM၊
ရုပ်ပုံများကို Picture-in-Picture mode နှင့်အခြားအရာများကြည့်ရှုခြင်း၏လုပ်ဆောင်မှုဖြင့် Chrome 72 ရောက်ရှိသည်
ဒါက Firefox 66 ပါ။ သူတို့လာမယ့်လွှတ်တင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာတွေပြင်ဆင်ပေးလဲ